The Frostbound Wood ee ATBB Cappella - Cafiska Muusikada ee David Warin Solomons
Home / Shaqooyinka Vokawn iyo Kooriyeynta / Shaqooyinka Guriyeynta / Shaqada Guriyeynta - Codka raga - Riyaal / Qaybta Frostbound Wood ee ATBB cappella
Qaybta Frostbound Wood ee ATBB cappella
Iibsashada Halkan: Warqada Music Plus
Categories: Shaqada Guriyeynta - Codka raga - Riyaal, Asal ahaan asalka ah
Ku dhaji dhibcahan
Meeshani waxay u dhigantaa xilliga qaboobaha
inkastoo dabcan dhacdooyinka dhabta ah ayaa ka dhacay meelo badan oo kulul.
Waxa kale oo ay ka tarjumaysaa inta badan calaamad iyo caan ah xilliga fasaxa ee xilliga jiilaalka: silsiladaha, holly etc iwm. Waxay u keenaysaa fikradaheena xilliga fasaxa Easter iyo dhiiga Jimcaha Wanaagsan.
Roobin ayaa la keenay meelo dabaqyo ah oo dhan la daboolay barafka.
Dabaysha sharraxaysa way carartay.
Laga soo bilaabo kasta oo berry yar yar dhibicda dhiig,
Kaas oo daboolay dhulka meesha quruxda badani istaagay.
Mugdigu wuxuu ahaa samada markii Malaa'igta u timid inay joogaan,
Waxay u keeneen foorno qadiimi ah si ay u hogaamiso jidka.
Shumacyada ayaa iftiiminaya dhammaantood si ay u arkaan,
Waxay dhalaalaan caawa habeenkaas ilaa sannadka da'da ah.
Qandaraaska waa ubaxyada sida jilicsan oo kale
Oo caddaanku waa weelasha dhulka ku dhaadhaca.
Maryan iyo ilmaheeda habeenkan jiilaalka,
Waxay ku socotay mugdiga iyo iftiinka shumaca. Dabaysha woqooyi waxay ku dabooshaa dhammaan beeraha,
Laakiin hal ilmo oo kaliya ayaa ku riyoonaya.
Dabaysha cirwareenta ahu way dhacdaa, Oo waxay ku degdegtaa haadka hawada,
Fiidiyowgu wuxuu heestaa muusigga:
Noqo midka ugu horeeya ee dib u eega "Daaqada Frostbound Wood ee ATBB Cappella" Cancel reply
Natiijooyinka la xiriira
Ku tukoow qaybta aan la aqoon - keli-ahaanshaha dabiiciga ah iyo isdhexgalka
Sayidkayga u maqla, Henry Purcell - codka ragga ee AATTBarBarBB
Qolka Frost Bound Wood ee SATB chorus a cappella Sabuurka 23 (oo Jarmal ah) SSAB ama AATB ama ATTB)
O mid yar oo macaan (E flat, B flat, Alto iyo bass clarinet)
Isbahaysiyada naxdinta leh (74)
Wind Trios Quintets Sextets iyo Nonets (363)
Dabaysha kale ee dabaysha (30)
Afar Dabayl (130)
Diyaargarowga afar degmo saxda ah (87)
Foosto Duufaan ah (46)
Dhinacyada afar geesoodka ah (131)
Qalabka Klawiska (241)
Guitarka ah ee isku dhafan (196)
Guitar iyo Flute (308)
Shaqooyinka Vokawn iyo Kooriyeynta (597)
Kooxaha Vocal Small (153)
Asal ahaan loogu talagalay Solo Voice iyo Guitar (132)
Aad arkaysid: Qaybta Frostbound Wood ee ATBB cappella